​ नाकबाट रगत किन बग्छ ? | Hamro Doctor News
सरकारले आजदेखि भेरोसेल खोपको दोस्रो मात्रा लगाउँदै
​ नाकबाट रगत किन बग्छ ?
By डा. प्रियंका गुप्ता, नाक कान घाँटी रोग विशेषज्ञ
नाक शरीरको ओठ भन्दा माथिल्लो भागमा रहेको हुन्छ । झट्ट हेर्दा दुइवटा प्वाल रहेको नाकको संरचना भित्र भने यसको बनावट जटिल छ । यसकारण पनि हामी धेरैलाई नाकमा के कस्तो समस्या आउँदा बिरामी हुन्छौं भन्ने सामान्य जानकारी पनि नहुन सक्छ ।
नाकको मुख्य काम श्वासप्रश्वास र गन्ध थाहा पाउनु हो । नाकको भित्री भागमा मसिना रौंहरु हुन्छन्, जसले वातावरणको हावालाई छानेर फोक्सो हुँदै शरीरमा प्रवाह गर्छ । नाकमा कुनै समस्या देखिएमा नाकको भित्री भाग र आँखी भौंसमेत दुख्न सक्छ ।
गर्मी मौसम सुरु भइसकेको छ । गर्मी बढेसँगै मौसमी तापक्रम पनि दिनानुदिन वृद्धि भइरहेको छ । साथै वातावरण प्रदुषण र धुलो धुवाँ पनि उत्तिकै देख्न सकिन्छ । तापक्रम वृद्धि र धुलो धुवाँका कारण नाकबाट रगत बग्ने समस्या देखापर्छ ।
]यसलाई आम भाषामा नाथ्री फुटेको भनिन्छ । सामान्यतया गर्मी समयमा बढी नाथ्री फुटेपनि जुनसुकै समयमा नाथ्री फट्नु अन्य रोगका लक्षण पनि हुन सक्छ । सामान्य कारणले नाकबाट रक्तश्राव भएमा रगत बन्ने कम हुँदै जान्छ तर, अन्य कारणले रक्तश्राव भएमा नाकबाट रगत धेरै बग्न सक्छ । जसका कारण व्यक्तिको मृत्यु समेत हुनसक्छ ।
नाकमा सिँगान जम्नु, नाकबाट पिप बग्नु, सिगानसँगै रगत बग्नु र कहिलेकाहीँ नाकबाट रगत मात्रै पनि बग्ने समस्या हुन सक्छ । नाकबाट रगत बग्ने धेरै कारण हुन सक्छ ।
बालबालिकामा नाकभित्र औलाले कोट्याउनु तथा बाह्य बस्तुले घोच्नु, ठोकिनु जस्ता कारण हुन्छन भने चोटपटकले पनि नाकबाट रगत आउन सक्छ । नाकमा बाहिरी वस्तु छिर्नु, उच्च रक्तचापका कारण नसा फुट्नु, दमको समस्या हुनु, गर्मीको समयमा पानी कम खानु, नाकमा संक्रमण हुनु तथा नाक सुख्खा भइरहने जस्ता कारणबाट पनि नाकबाट रगत बग्ने समस्या देखापर्छ ।
नाकबाट अत्याधिक रगत बगेमा शरीरमा रगतको कमी हुने, आँखा धमिलो देख्ने, टाउको झमझमाउने जस्ता समस्या आउँछ । फोहोर हात नाकमा नराख्ने, नाकको सरसफाइमा ध्यानदिने, जस्ता व्यवहार अपनाउनु पर्छ । नाकबाट रक्तश्राव भइरहेमा बिरामीलाई उत्तानो सुताउने र रक्तश्राव कम नभएमा तुरुन्तै चिकित्सकको सल्लाह लिनुपर्छ ।
डा. गुप्तासँग नबिना कार्कीले गरेको कुराकानीमा आधारित
Last modified on 2016-08-09 11:21:03
sangram tamangon Sat, Mar 31 2018 05:54 AM
Mero nak asadai palx kahile kai nakbata ragat pani aux yasko lagi k garnu parx k vako hola malai
प्रेम कलौनी on Sat, Feb 03 2018 12:29 PM
राति सुतेर बिहान उथदा खेरी नाक बात सिगान सङ सङै रगत पनि आउछ यो कुनै प्र्कार को Problem त होइन
ओमलाल ओलीon Tue, Oct 31 2017 07:47 PM
मेरो नाग बाट महिनामा एक पटक सधै रगत बग्छ जाडो गर्मि दुवै याममा के गर्दा राम्रो हुन्छ सर
सन्तोश बिस्टon Wed, Jul 19 2017 02:12 PM
मेरो नाक बाट धेरै रगत बग्ने गर्छ जाडो अनि गर्मी मा पनि म यसको लागि कहा गयर सल्लाह सुझाब लिउ
रेगम रोकाon Wed, Apr 19 2017 10:38 AM
मेरो नाक बाट सधै जसो रगत बग्ने गर्छ जाडो समयमा पनि अनि गर्मी मा पनि म यसको लागि कहाँ गएर सल्लाह सुझाब लिउ।